Vehicle History Akụkọ
E nwere nza nke ndị na-enweghị ike imeli ịzụta a ụgbọala ọhụrụ, ma ọ bụ na-ịzụta a mbụ ụgbọ ala maka otu n'ime ụmụ ha. Ọ dịghị onye chọrọ ịzụ a lemon, ma ọ bụ a ụgbọala na kemgbe na a ọjọọ mberede, na onye ọ bụla chọrọ ịzụta a tupu ekesịpde ụgbọala na ọzọ bụ ma ọ bụ obere dị mma. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na ịzụ a tupu ekesịpde ụgbọala e nwere ọtụtụ ihe na i kwesịrị ịtụle tupu na-ekpebi na nke ụgbọ ala ịzụta ma na-eme ihe ulo oru mbo. Eleghị anya, otu n'ime ihe ndị kasị mkpa ị pụrụ ime iji chebe onwe gị si ịzụ a ọjọọ ụgbọala bụ ịzụta a ụgbọala akụkọ ihe mere eme akụkọ, makwaara dị ka a vin ego.
Tupu ịzụrụ a tupu ekesịpde ụgbọ ala gị kwesịrị mbụ chọpụta ụfọdụ isi eziokwu banyere ụgbọala na ajụjụ na-enyere nkwa na ị na-eme a maara ihe ulo oru mbo. Bụ na mma dị ọcha na-egbu maramara ụgbọ ala na a freshly uzuoku kpochara engine ogige na ị na-achọ na a lemon? Ọ nọwo na a ọjọọ mberede ụgbọala, ma ọ bụ ma eleghị anya, Ọ nọwo na a iju mmiri, ma ọ bụ njọ ma, ka e zuru? Site ịzụta a ụgbọala akụkọ ihe mere eme akụkọ na-agba ọsọ a vin ego ị nwere ike mfe zaa ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị a na a dum otutu ihe.
A Lot ndị ọkachamara ga-agwa gị na-enwe a ụgbọala akụkọ ihe mere eme akụkọ na ụgbọ ala na ị na-atụle azụ bụ eleghị anya otu n'ime ndị smartest Nkea ị pụrụ ime ka mgbe ịzụta a eji ụgbọ ala. Gị mgbe ihe ahụ ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọala nwere ike ịbụ na site na ọ bụ ndụ. Ị ga-tụrụ ya n'anya otú ọtụtụ ihe nwere ike-ezo site oké ime na mputa zuru ezu ihicha na a mma, onwunwu, ọhụrụ uwe nke agba.
Vehicle akụkọ ihe mere eme na-akọ na vin ndenye ego bụ oké ụzọ ego na egwu ndekọ nke fọrọ nke nta niile ji ụgbọala na gwongworo. Ndị a na-akọ na-enye buyers na a ndekọ nke ụgbọala akụkọ ihe mere eme dabeere na ugbo ala Oghere Usoro ọgụgụ (Mmanya), ha ego ụgbọ ala akụkọ ihe mere eme site vin. A vin nọmba ego ga-egosi ihe si DMV na mkpuchi ndia, dị ka o kwere omume odometer wayo, na-echeta n'ihi na ụgbọala nakwa lemon iwu ịzụta Akwadoo, na kwa ọzọ ihe ha ga-egosi obere ma ọ bụ isi nkukota mmebi. Mgbe ụfọdụ ọmụma na-mere dị ka ma ma ọ bụ ụgbọala bụ a nsoro ụgbọ ala ma ọ zụtara a ụgbọ ala mgbazite nsoro.
Vin Number Tulee
E nwere ọtụtụ weebụsaịtị online ka ego ụgbọ ala akụkọ ihe mere eme na-eme a vin nọmba search. Vehicle akụkọ ihe mere eme na-akọ na vin ndenye ego dị maka ihe niile si ụgbọala na gwongworo na SUV si ọgba tum tum, ATV si (All teren Vehicles) na ntụrụndụ Vehicles (RV si).
Otú ihe ndị a na-akọ na-eri dịgasị iche site na-ere ka ere na-abụkarị gburugburu $20 ka $40 dollar. Na ndị na-kpọsaanụ free ndị na-emekarị nnọọ decoders, nke anyị ga-esi na-e mesịrị. Ịzụ a ụgbọala akụkọ ihe mere eme akụkọ bụ obere price iji kwụọ ụgwọ maka inwe ụfọdụ udo nke uche banyere ụgbọala ị bụ banyere ịzụta. Ọ bụkwa a obere ego iji kwụọ ụgwọ mgbe ọ na-nwere ike nwere ike ịzọpụta gị ọtụtụ puku dollar na nsogbu na ụgbọ ala n'ibu Ndozi ala n'okporo ụzọ. Ọtụtụ ugboro mgbe mmadụ na-ere a ụgbọala ha ga-agwa gị banyere nsogbu na ụgbọ ala. Ọbụna mgbe ule na-akwọ ụgbọala a ụgbọala na-achọ ya n'elu n'ezie ọma, nwere ike ị gaghị bulie on na ihe niile dị mma na ụgbọala. Ọbụna mgbe ị na-ụgbọala gị na-arụ ụgbọ, ha nwere ike na-atụ uche ihe ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ.
Ya mere ugbu a, ị pụrụ ịhụ ihe mere inwe a ụgbọala akụkọ ihe mere eme akụkọ ma na-eme a vin ego bụ nnọọ mkpa. Ọ ga-ekwe ka ị na-eme ka a ọzọ dabere mkpebi banyere ụgbọala ị na-eche echiche banyere ịzụ. Na ọtụtụ ikpe ha na-eri gburugburu $20 ka $40 na-eme ka ọ a dịghị brainer. Ọ bụ a obere ego n'ihi na ị na-etinye ego nke ga-enyere gị aka izere a ụgbọala na-anọdụ na arụzi mgbe niile na-agwụ elu-efu gị a ton ego.
Best Cheap Car History akụkọ na Cheap Vin Tulee Nyocha